Kodzero-dzevanhu, 17 Chivabvu 2017
Chitatu 17 Chivabvu 2017
Zimbabwe Yoita Mari neFodya Inovhiringa Hutano hweVanhu
Apo varimi vefodya vari mubishi rekutengesa fodya nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirimwa ichi chiri kuvhiringa hutano hwevanhu vakawanda pasi rose.
Zanu PF Yoronga Kubvisa Mutemo weDual Citizenship?
Vanokokera Zanu PF muparamende, VaLovemore Matuke, vakati ichokwadi kuti Zanu PF iri kuda kuvandudza bumbiro remitemo kuitira kuti dual citizenship ibviswe.
Kuumba Mubatanidzwa weMapato Anopikisa Kwonetsa
Kunyangwe hazvo paine ongororo yeAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aite mushandirapamwe sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa, izvi zvinenge zviri kukona n’anga murapwa achida.
Mitengo yeZvinhu Yokwira Panguva Iri Kunetsa Mari Munyika